ခါထုတ် နင်းတက် – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 29 April 2011 29 April 2011 Categories Discussion, Reproduction, Translation, Uplifiting
4 thoughts on “ခါထုတ် နင်းတက်”
30 April 2011 at 9:08 am
This thinking is the one I got first time.
I will try to escape past black hole by doing “ခါထုတ် နင်းတက် ”
And also noted this point “ဒါတင်မကသေးဘူး တစ်ခါတလေ ကိုယ့်နာကျင်မှုကို မကြာမကြာ “အစမ်းလေ့ကျင့်”နေတာက ရှိသေးတယ်။ ကိုယ်ခံစားရတာကို လူတကာကို လည်ပြောတာဟာ ကိုယ့်ခံစားမှုကို ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ အသားမသေအောင် အစမ်းလေ့ကျင့်ပေးနေရာ ရောက်နေတာပဲပေါ့။”
I promise no longer practicing/rehearsing like that.
Heartily thanks to read this useful article.
6 May 2011 at 1:10 pm
25 May 2011 at 8:03 pm
ဖတ်ရတာ အားရှိတယ် ဆရာ…
facebook မှာရှယ်လိုက်ပြီ ဆရာ..
Previous Previous post: ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ ပြစ်ဒဏ်
Next Next post: Photos in My Heart